Ishishini Imbambano Abaqondisi-Mthetho Isemthethweni Thelekisa Umthetho Library
Ushishino disputes ingaba i-inevitable kwaye unavoidable iindleko uyasebenza kushishino. Ngokuqhelekileyo, kushishino kukho imbambano phakathi amashishini xa sukuba awuvumi kangakanani phezu ngokwemiqathango yecandelo isivumelwano ukuba ibophelela ezowiso omabini amaqela, kodwa ushishino imbambano ingaba kwenzeka kulo naliphi na inani ngeendlela ezininzi. Ushishino disputes unako niphakame na uhlobo amalungiselelo, kodwa kukho abathile iintlobo ungquzulwano ezingekho ngaphezulu ngokufanayo ngaphezu kwabanye. Amashishini ukuba employ okanye umsebenzi kunye omhlaba, purchasers, abanikezeli, okanye ishishini partners rhoqo kuba isivumelwano disputes. Mhlawumbi omnye umntu akakwazi kukholelwa wayengomnye wahlawula isivumelwano ixabiso, omnye umntu akazange wazisa izinto okanye inkonzo wayengomnye wathembisa, okanye ukuhanjiswa waba ngaphandle wavuma phezu ixesha elimiselweyo.
Amashishini ukuba akhulule impahla okanye iinkonzo abathengi nokutya disputes kunye zabo abathengi malunga nokuba ngaba izinto okanye iinkonzo anikezelwa okanye ukuya kwi-eliqhelekileyo elindelekileyo. Amashishini ngokuqhelekileyo anike iziqinisekiso eziqukiweyo ukuze iimveliso ingaba lwempahla ethengiswa kwaye zokusebenza. Xa iimveliso kusini na, okanye ukuba imveliso ngqo kwenzakala umthengi, amabango ngokuchasene ishishini ingaba rhoqo ezenziwe sesi sibini. Imisebenzi amabango ingaba rhoqo ezenziwe sesi sibini ezinxulumene amashishini, ingakumbi enxulumene zabo hiring kwaye firing iindlela ezilungileyo. Amashishini ayikwazi discriminate okanye harass abasebenzi bayo, kwaye abo benze expose ngokwabo yeshishini amabango. Ngexesha ishishini andinaku insulate ngokwayo ukusuka zonke eyimali, unako umda malunga nenkqubo yolawulo olumanyanisiweyo imfuza ishishini disputes. Amashishini ukuba institute imigaqo-nkqubo nemigaqo-nkqubo ukuze alawule babo ngemini umhla interactions kunye abasebenzi kwaye eyenziweyo kunye namanye amashishini ukucutha malunga nenkqubo yolawulo olumanyanisiweyo imfuza ka-disputes. Umzekelo, ushishino ukuba usebenzisa esezantsi, ishishini ikuvumile amaxwebhu kunye boilerplate ulwimi kuba zabo zonke ishishini dealings ingaba ngaphantsi sifuna kukhokelela disputes malunga zabo zengqesho dealings.
Amashishini kufuneka kuba imisebenzi imigaqo-nkqubo ye-hiring kwaye firing abasebenzi
A izakhono imisebenzi lamagqwetha kufuneka uncedo kwishishini idrafti ezi nkqubo, ngoko ke ngabo engqinelana nomthetho okhoyo imisebenzi imithetho. Kuba amashishini ukuba ingaba abathengi, ukufumana waivers okanye ukwenza ukuqinisekisa ukuba zonke iimveliso ngokucacileyo kwaye visibly kuba kufanelekileyo imveliso izilumkiso kungasinceda uphephe eyimali. Ukuba ishishini lakho akakwazi ukunqanda amabango, ungafuna rely kwi-small amabango inkundla kuba egqiba imali eseleyo eyilwayo, amatyala, okanye imisebenzi imiba xa umonakalo othe kuwa phakathi ezincinane amabango’ imida. Kukho rhoqo Enye Imbambano Isisombululo («ADR») clauses kulo mcimbi izivumelwano oko kufuna na disputes enxulumene isivumelwano kube kugqitywe nge-bophelela arbitration okanye bafuna mediation phambi filing isuti. Arbitration ke yinkqubo kuba egqiba imbambano phakathi ezimbini amaqela ngaphandle inkundla inkqubo kodwa lufana a yovavanyo ngaloo omabini amaqela argue zabo meko»arbitrator.»I-arbitrator listens ukuba disputing amaqela’ iingxaki kwaye iimpikiswano ke lugqiba kwi isisombululo. Mediation yi uhlobo negotiation phakathi ezininzi amaqela facilitated nge ezimeleyo-aplikeshini zabanye abantu (i-mayuda). Mediation ngu-ngokungafaniyo arbitration kwi ukuba mayuda akakwazi ukwenza isigqibo esiphathelele amaqela kwaye ubungakanani endaweni yoko, mayuda ke sole uxanduva ngu ukuzama ukunceda amaqela kwenzeka a isisombululo kwi kwezabo. Ukuba amaqela bengenakho ukusisombulula zabo imbambano ngaphandle wenkundla, omnye umntu usenokuba kwifayili isuti ngokuchasene nesinye. Ushishino disputes kusenokuba enobunzima kakhulu, ixesha-consuming kwaye kunzima ukusombulula. Kushishino lamagqwetha unako ukunceda ukuba zixelele kwishishini lakho imbambano, nokuba ngokusebenzisa bophelela arbitration, mediation, okanye litigation, kwaye unako ukunceda sombulula yakho meko favorably
Isampuli isivumelwano kuba dismissal yi-isivumelwano zamaqela. A ingxelo kwi dismissal yi-isivumelwano zamaqela